Tenga 4-DHEA powder (571-44-8) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Prohormone / 4-DHEA upfu (571-44-8)
Rating: SKU: 571-44-8. Category: Prohormone
MUTSVENE unobatanidzwa uye unyanzvi hwekugadzira kubva pa gram kusvika kuhutachire hwe 4-DHEA powder (571-44-8), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano hwehutano.
Apo iwe unoda kuwedzera simba uye utano hutano, prohormones akadai 4-DHEA powder ndiyo imwe nzira yekubatsirwa kubva kune hutano hwakanaka uye musimba. 4-DHEA inonzi prohormone inokurudzira nitrogen kuchengetedza, simba, uye izwi rekuyerera kweropa kusvika musimba. Kuwedzera 4-DHEA kune chirongwa chako chekudzidzisa simba uye chimiro chemuviri uye zvine zvinogutsa zvinoguma nehuwandu hwemigumisiro.
4-DHEA powder video
4-DHEA powder Basic Characters
Name: 4-DHEA powder
Molecular Kurema: 288.42
Color: Muchena kana Muchena mutsvuku mutsvuku
4-DHEA powder cycle
Makemikari Mazita: 4-DHEA powder
4-DHEA powder Usage
5-DHEA inonzi prohormone inoita kuti utano hwakanaka uyerorogenic huvepo uye inogona kudzorera mazinga eDHEA mumuviri. Inoramba isingashandisi kusvikira zvirongwa zvichikonzerwa panguva yakakodzera. Ihomoni DHEA inoberekwa ne-adrenal glands, asi uropi hunoitawo saizvozvo. DHEA inobvumira kuburitsa f androgens uye estrogen, iyo inobatsira inonyanya kudiwa neavo vanoda kuwedzera ukuru hwemasumbu uye utano hwakanaka. Sezvo muviri uripo, DHEA inogadzirwa mumuviri inoderedza. Kuderedzwa kweDHEA mumutumbi kunotungamirira kuhutachiona hweHommonal, kuderedzwa kwepabonde, uye osteoporosis.
4-DHEA powder is prohormone inofanana neDHEA chaiyo mumuviri. Batsiro rekuwedzera 4-DHEA powder kuhutano hwako uye hurongwa hwemasimba hwakawanda.
Low estrogenic nemigumisiro inowanzobatanidzwa nevanabolic steroids. Estrogenic nemigumisiro inosanganisira kuwedzera bvudzi bvudzi, mazamu muvarume, zviduku zvemazamu muvakadzi, zviso zvebvudzi muvakadzi, zviduku zviduku mumarume, uye kuora mwoyo. 4-DHEA powder haina mimwe yakafanana. Estrogenic nemigumisiro inopindura, saka iyo inoguma yekuwedzera yesrogen.
Kuwana masasa nekuwedzera nitrogen kuchengetedza mumusumbu
Kuwedzerwa kunongororwa kwekakori yekuchengetedza kwepamusoro yekushungurudza kwemisimba
Kuvandudzwa kwemuviri wezvirwere zvemuviri
Kuvandudza musimba simba
Yakaderedza kupora nguva muscle yakaneta.
Izvozvo zvakafanana nemasikisi nemigumisiro isingaiti
Kuwedzera Mhirizhonga muGym
Inowedzera Maonda Musimba Misa
Kwete Chiropa Chinotyisa
4-DHEA powder ndiyo inofanirwa kuve yakanyatsokonzera kukurudzira misi mizhinji, kwete kuideredza. Taura nechiremba wehutano pamusoro penzira dzaunogona kuwedzerwa kuti uwane zvaunoda. Zvakakosha kuisanganisira 4-DHEA powder nechitsigiro chechikwata uye kupera kwemashure. Izvo zvakare zvakare kutora 4-DHEA powder mufomu yemapiritsi kuderedza mari uye kudiwa kweiyo. 4-DHEA powder inhengo yemumuromo inonyanya kuiswa uye inogona kupinda mumuviri nokukurumidza kuburikidza nekushandisa Liposomal capsules.
Ndechipi chiyero che 4-DHEA powder
4-Androsterone inobhururuka, ine vanabolic yakasimba, inoshandura mu testosterone kuburikidza nechinhano chechipiri chekugadzirisa. Icho chinonzi prohormone isirimhylene, iyo inoreva kuti ine zvishoma kana zvinokonzera kushuvira pachiropa uye nhengo dzomushandisi.
6-Andro inoshanda zvakanaka seine stacker kana inoshandiswa nemamwe prohormones ekudhinda. Pa 700 kusvika ku1,000 mg, unowana chigumisiro chinotyisa kana chinoshandiswa mumutambo mumwe chete. Sezvimwe chikamu chepakiti, 4-Andro's sweet spot doses iri pakati pe300 kusvika 500 mg.
Nevatangi vekutanga: mhanya 4-Androsterone ye4 kune mavhiki 6 pa 300-500 mg.
Kune vese vashandisi: shandisa 4-Androsterone ye6 kusvika kwemavhiki 8 pa 300-750 mg.
Iyo 4-DHEA powder inoshanda sei
Prohormones ndiyo inogadziriswa sarudzo yepamusoro yehomoni yakawanikwa. Prohormones ndiwo mashizha anotorwa nemuromo. Prohormone inoreva kuti maitiro emakemikari ndeyekutanga kwehomoni. Pamusoro pavo, havakwanisi. Basa ravo nderokupararira neropa. Pamwe prohormone inoshandurwa kuva hormone, iyo inoronga mahomoni. Funga nezveprohormone kuva pro-proteine ​​inotendeukira kune proteinini yekuvandudza mutambi uye kushanda kwehutano. 4-DHEA powder imwe yeprohormone yakadaro.
Pashure pokunge wapedza, 4-Andro inopinda muropa rako uye inoshandura kuva testosterone. Iyo kambani inotanga kuve nemafungiro akareba anbobolic, zvichikonzera kuhukuru nesimba kunowedzera apo kuwedzera yako zvepabonde motokari-kukupa iyo inoshamisa "Alpha Male Ecstasy."
4-Androsterone inokonzera kukura kwemasumbu kunowanikwa zvakananga, zvakapoteredza 8-12 mapaundi emvura yakaonda mukati me4 kusvika kumavhiki e6 anoshandisa prohormone. Cherechedza kuti izvi zvichaitika zvakajeka nekudya kwakakodzera uye kubasa.
Mukuwedzera, tarisira kuva nemigumisiro iyi:
Simba rakanaka nesimba
Kurumidza kupora nguva
Hongu, iwe unoda kuenderera mberi pakutsigira paunotora 4-Andro sezvo inogona kukanganisa ropa rako. Izvi zvinokosha zvakare pakukurudzira utano hwehutano hwehutano hwakanaka.
Saizvozvowo, post cycle therapy (PCT) chikamu chinokosha chekufamba-famba sezvo ichinyatsokubatsira kuti uchengetedze migumisiro apo uchibatsira muviri wako mukuwanazve huwandu hwehutachiona huripo.
Kune mimwe migumisiro miviri inofanirwa iwe kuziva. 4-Andro ine matambudziko akafanana neA1-Andro.
Kutyisirwa kwebvudzi kurasikirwa, acne, prostate kuwedzera, testicular shrinkage, kuwedzera kuoma nhengo, kukwirira, uye mamwe matambudziko emwoyo.
LDL yako (yakaipa) cholesterol ichakwira uye HDL (yakanaka) cholesterol ichaderera. Kwete zvakanaka pamwoyo wako.
Chero nzira, idzi migumisiro yemigumisiro ichapera kwemavhiki mashoma mushure mekunge mazamu ako apfuura. Saka haisi nguva refu.
Ita kuti ropa rishande kare, shure, uye munguva yako. Uyewo uve ne-cycle therapy pane.
Iwe unogona kuderedza midzi yemigumisiro nekungopfupisa kutenderera kwako urefu uye / kana kuderedza kuyerwa.
4-DHEA powder Marketing
I4-DHEA powder Iva Nezvimwe Zvikamu Zvimwe
4-Andro ine zvishoma zvisingabatsiri migumisiro. Iwe unogona kuve nemwana muduku isrogen kutendeuka, misumbu yakakomba, kukwirira kweropa, kushungurudza uye pane dzimwe nguva gynecomastia (gyno).
An estrogen blocker inofanirwa kuderedza isrogen kutendeuka uye kudzivisa gyno pamwe nezvimwe isrogen yakabatana nemigumisiro. Izvi zvinogona kuderedzwa kana zvachose kudzivirirwa nekugadzirisa kwakarurama kuwedzera.
Nzira yekutenga 4-DHEA powder kubva kuAASraw
Deflazacort Upfu (14484-47-0)
Ulipristal Upfu (159811-51-5)